Poco F2 प्रो खरीद गर्नुहोस्: कारण यो मार्केट हिट जब गर्न को कारण Androidsis
Reasons कारण Poco F3 प्रो खरीद गर्न
हिजो हामीले घोषणा गर्यौं सियाओमी सहायक कम्पनीबाट नयाँ टाइटनको आगमन। यदि उहाँ पोको F2 प्रो यो पहिले नै आधिकारिक हो, एक नयाँ मोडल किलर बन्नको लागि एक मोडेल। तिनीहरूका हतियारहरू? एक धेरै आकर्षक डिजाईन, सुविधाहरू बाहेक यो क्षेत्रको शीर्षमा यसलाई एक्स्टोल गर्दछ। र सावधान रहनुहोस्, यो सब ध्वंस मूल्यमा।
तर के यो वास्तवमै यसको लागि लायक छ? Poco F2 प्रो खरीद गर्नुहोस्? तपाईं अझै सोच्नुहुन्छ कि तपाईं राम्रो समाधानहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ, वा सामसु or वा हुवावे जस्ता ब्रान्डको फ्ल्यागशिप अधिक खरीद गर्न लायक छ।
1 Poco F2 Pro खरीद गर्न नहिचकिचाउनुहोस् यदि तपाईं गेमिंग फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने
2 एक विशाल बैटरी
3 एक स्क्यान्डल मूल्य, Poco F2 प्रो खरीद गर्न मुख्य कारण
Poco F2 Pro खरीद गर्न नहिचकिचाउनुहोस् यदि तपाईं गेमिंग फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने
सियाओमी सहायकले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग भिन्नता राख्नको लागि साना दृश्यको पनि ध्यान लिएको छ। र सब भन्दा चाखलाग्दो तत्वहरू मध्ये एक यसको तरल कूलि system प्रणालीको साथ आउँदछ। हो, Poco F2 प्रो शर्त बजार मा सबै भन्दा राम्रो हार्डवेयर मा। समस्या यो हो कि खेलहरूको निरन्तर प्रयोगलाई एक विशेष ग्राफिक लोडको आवश्यक पर्दछ, विशेष गरी टर्मिनलमा एल्युमिनियमबाट बनेको शरीरको साथ बम टाइम बम हुन सक्छ।
तर पोपोफोनले समाधान फेला पारे: पूर्ण प्रणालीको तरल प्रशीतन, ग्रेफाइट को धेरै तहहरू द्वारा समर्थित, जसले फोनलाई हीटिंग समस्याबाट ग्रस्त हुन अनुमति दिँदछ। यस तरिकाले, तपाईं घण्टा फोर्टनाइट खेल्न सक्नुहुनेछ कुनै पनि चिन्ता बिना।
पनि, हेरिरहेको प्राविधिक विशेषताहरु यस टर्मिनलबाट, यो स्पष्ट छ कि यदि तपाईं Poco F2 प्रो खरीद गर्न चाहानुहुन्छ, यसले तपाईंलाई बिलकुल निराश पार्दैन।
SCREEN पूर्ण HD + रिजोलुसनको साथ .6.67..180 इंच AMOLED - १ H० हर्ट्ज नमूना दर - चमकको १,२०० nits - HDR1.200 + - गोरिल्ला ग्लास 10
प्रोसेसर --कोर स्नैपड्रैगन .865।
र्याम -6-१-8 जीबी LPDDR5
क्यामरस रियर गर्नुहोस् MP 686 MP सोनी IMX64 मुख्य सेन्सर - MP MP Telemacro सेन्सर - २ MP गहराई सेन्सर
अगाडिको क्यामरा पप-अप संयन्त्रको साथ २० MP
बैटरी 4.700W द्रुत चार्जको साथ 33 एमएएच
अपरेटिंग प्रणाली Android १० पोको लन्चर २.० इन्टरफेसको साथ
जडान G जी - वाईफाई - - सुपर ब्लुटुथ .5.० - डुअल जीपीएस - यूएसबी-सी - एनएफसी - मिनी ज्याक - आईआर ब्लास्टर
अन्य सुविधाहरू अन-स्क्रिन फिंगरप्रिन्ट रिडर - लिक्विड कूलि।
तर निस्सन्देह, यदि टर्मिनलले मलाई दिनभरि चलाउँदैन भने के त्यस्ता शक्तिशाली सुविधाहरू प्रयोग गर्छन्? यो त्यहाँ दोस्रो कारण किन आउँछ किन Poco F2 प्रो खरीद कुल सफलता हो।
एक विशाल बैटरी
तपाईले छविमा देख्न सक्नुहुनेछ कि यी लाइनहरू हेड गरिरहेछन्, एशियाई निर्माताले मोड्युलको लागि रोजेका छन् 4.700 एमए, उत्कृष्ट स्वायत्तता प्रस्ताव गर्न पर्याप्त भन्दा बढी। थप रूपमा, पोकोफोन एफ २ प्रो स्क्रिनसँग पूर्ण एचडी + रिजोलुसन छ, जसले QHD प्यानलको तुलनामा संसाधनहरू बचत गर्दछ।
र एन्ड्रोइड १० को आगमनको बारेमा के हो, जसले ऊर्जा दक्षतामा उल्लेखनीय सुधार गर्दछ, स्न्यापड्रैगन 10। प्रोसेसरले प्रस्ताव गरेको पूर्ण संसाधन प्रबन्धनमा थप्यो, तिनीहरू एक उत्तम ककटेल बनाउँछन् ताकि पोको एफ २ प्रोको ब्याट्री दुई दिनसम्म रहन सक्दछ। एक ठूलो विवरण जसले यसको प्रतिद्वन्द्वीको तुलनामा फरक पार्छ।
एक स्क्यान्डल मूल्य, Poco F2 प्रो खरीद गर्न मुख्य कारण
एक साधारण राउन्ड उत्पादनको केकमा आईसिंग यसको कम मूल्य हो। र तपाई Poco F2 Po खरीद गर्न सक्नुहुनेछ6GB को र्याम र 128 GB भण्डारण मात्रको लागि 549 यूरो। हो, त्यहाँ वास्तवमै एक पदोन्नति छ जुन मे १ ends मा समाप्त हुन्छ र यसले तपाईंलाई e० यूरो बचत गर्न अनुमति दिन्छ, तर यो अझै पनि एक ध्वस्त मूल्य हो।
सम्झनुहोस् कि यस मोडेलको G जी नेटवर्कको लागि समर्थन छ, र यसको प्राविधिक विशेषताहरू हेरेर, यो स्पष्ट छ कि पोको एफ २ प्रो टर्मिनल हो जुन कम्तिमा life वा years बर्षको उपयोगी जीवनको साथ हुन्छ। त्यसकारण, त्यो मूल्य दायरा भित्रमा यससँग कुनै प्रतिस्पर्धी छैन जुन प्रदर्शनको मामलामा यसलाई नजिक आउँछ, यो स्पष्ट छ कि यस टर्मिनल खरीद गर्न गल्ती हुनेछैन। र उदाहरणका लागि स्यामसंग ग्यालेक्सी S5 सँग के भिन्नता छ? मुख्य रूपमा स्क्रीनको रिजोलुसन, वायरलेस चार्जिंग, पानी प्रतिरोध र फोटोग्राफिक सेक्सन।
थप रूपमा, ध्यानमा राख्दै स्पेनमा एक्सीनोस प्रोसेसरको मोडेल आउँदछ, क्वालकॉमको मुकुटमा गहना भन्दा कम, यो तथ्य हो कि पोको एफ २ प्रोले राम्रो प्रदर्शन प्रदान गर्नेछ ...
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » चिनियाँ एन्ड्रोइड » Reasons कारण Poco F3 प्रो खरीद गर्न
एचएमडी ग्लोबलले आखिरमा नोकिया 10.१ प्लसको लागि एन्ड्रोइड १० जारी गरेको छ
माइक्रोसफ्ट स्विफ्टके किबोर्डको4उत्कृष्ट विकल्पहरू